Saddexdaan Sheeko & Xalka Siyaasadeed ee Maanta Sidee Isu Qabtaan? | KEYDMEDIA ENGLISH
Sheekadan oo kamida kuwa xallinta khilaafaadka ugu xikmadda badan baa ku saabsan laba qoys oo guryahoodu isku xigeen oo isku qabsaday geed dhexdooda ka baxay, ka bacdi markuu weynaaday. Markii muddo khilaafkoodu jiitamay baa la dhex galay oo la wada-hadalsiiyey. Waxaa la ogaaday in aan midna midka kale ka adkaan karin oo muquunin karin oo tiisa marsiin karin (sida aan maxsuulka 1aad kusoo sheegnay). Waxaa kale oo laga codsaday in uu labada qoys mid ka tanaasulo oo midka kale u daayo geedka, xalkaasna waa diideen (fiiri maxsuulka 2aad). Waxaa laga codsaday inay geedkaba iska ilaawaan oo labadooduba kasoo qaadaan in aan dhibba jirin, taasna waa diideen oo waxay ku adkaysteen in geedka xal laga gaaro haddii kale aanay nabad helaynin (maxsuulka 3aad). Waxbaa meesha ka salaglehe, waxaa haddana laga codsaday in geedka laba loo kala jaro oo midba qaybtiisa siduu doono ka yeelo, kaasna waa diideen oo waxay ku doodeen in geed la kala jaray waxba ugu filnayn oo qalalidoono (maxsuul 4).
Waxaa laysku dayey in la helo ama iyagu islaa helaan xal isla-ogol ah oo danahooda is waafajiyaan laakiin caloolxumada iyo iyaga oo isu fiirsanayey oo is dhaliilaayey awgoodd, may u suurtogelin inay isku dayaan inay danahooda is-waafajiyaan (maxsuulka 5aad).
Waxaa la sheegay in saddex wiil ahi habeen ku dirireen xabbad liin ah oo kalideed guriga taallay. Mid kastaa waxa uu rabay in uu liinta isagu qaato. Iyagoo xoog u dagaalamaya baa waxaa u timid hooyadood oo weydiisay sababta ay u dirirayaan waxayna u sheegeen xabbad liina oo kaligeed guriga taalla in uu midkastaa rabo. Hooyadii waxa u muuqatay in aanay kala adkaan karin oo midna kalidiis liinta xoog ku qaadan karin. Markaas waxay qaaday liintii oo ay ka codsatay inay iska iloobaan inta waagu baryayo waana ay diideen oo waxay ku adkaysteen in habeenkaa lagu kala baxo. Hooyadii waxay ka codsatay inay isu-daystaan oo mid looga hadho taasna waa diideen. Kabacdi waxay ka codsatay inay wada-hadal galaan oo xal ay iyagu keeneen ku dhammeeyaan khilaafka liinta, taasna xaalkooda oo xumaaday, cadho iyo ciil ay kala tirsanayaan baa u suurtogalin wayday inay si degan u wada hadlaan oo danahooda is waafajiyaan.
Intaas ka bacdi, hooyadii inta ay mindi soo qaadatay bay liintii u kala qaybisay 3 qaybood oo is le’eg. Kolkaas bay midkiiba siisay qayb. Iyagoo aan qanacsanayn laakiin xal kooban helay oo midkastaa intii uu rabay saddex marka loo qaybiyo hal qayb kaliya helay bay la kala dhaqaaqeen. Hase ahaatee, saddexda wiil mid waxa uu rabay midhaha (miraha) oo intuu 2 midho kaliya helay buu intii kale tuuray. Wiilkii kalena waxa uu rabay liinta diirkeeda oo inta uu diirkiii la baxay buu intii kale tuuray. Midkii kalena waxa uu rabay in uu liinta cuno markaa jeexii uu helay buu cunay mirihii iyo diirkiina waa uu tuuray.
Farmaajo waxaa lagu xasuusan doonaa Qaraxii Zoobe!
Editorial Cabdulqaadir Maxamed Cismaan (Cabdiboqor) | 17 October 2020 18:49
Sida madaxweynaha Mareeykanka Donald J. Trump loogu xasuusan doono, ineey hogaan xumidiisa darteed ku hoos dhinteen in ka badan, laba boqoloo kunoo Mareykan ah, ayaa sidaa si lamid ah, MW Farmaajo loogu xasuusan doonaa, in hogaan xumidiida darteed, ummada Soomaaliyeed uga dhinteen, hal maalin iyo waliba hal qarax, tiradii ugu badaneyd ebid, waa qaraxii Zoobe’e.
​​​​​​​Waa Kuma Taliyaha Kumaandoosta ee Farmaajo Sharci-darrada ugu xiran?
Editorial Cabdulqaadir Maxamed Cismaan (Cabdiboqor) | 16 October 2020 6:58
Editorial 13 October 2020 11:09
Islaam Argagixiso ma noqdee, Ayagaa Argagixiso Waligood ku noolaa!
Editorial 11 October 2020 6:30